Fitbit Ionic nwere mmekọrịta na mmekọrịta nsogbu | Gam akporosis
Akpa Fitbit Ionic Buyers Report Mmakọ na Mmakọ Issues
Fitbit amalitela n'ụwa ọhụụ ọhụụ ọhụụ akpọrọ Ionic, o yikwara ka ọ bụghị dị oke mma dị ka ọtụtụ ndị chere, na-ekpe ikpe site na ozi ndị e bipụtara na forums nke forum na gadget.
Ọ bụ ogologo oge tupu Fitbit wepụtara ezigbo smartwatch. Ọkụ ahụ rutere na 2016, kemgbe ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ agafeela na-ahụghị ozi ọ bụla site na ụlọ ọrụ ahụ.
N'afọ gara aga, Fitbit bụ otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị ewu ewu na ahịa elekere mgbatị ahụ, na Blaze bụ otu n'ime ngwaahịa kachasị mma ebe ahụ. Agbanyeghị, n'oge Fitbit Ionic dịgidere, ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ wepụtara smartwatches dị elu karị.
Nyocha na-adịghị mma ga-emetụta ụlọ ọrụ ahụ
Zọ kachasị mma iji chọpụta ma ọ bụrụ na ngwaọrụ dị mma gaa na nzukọ ndị isi ozugbo. Ọtụtụ ndị ọrụ anatalarị nkeji Fitonic Ionic ha, ụfọdụ tupu ụbọchị mmalite ọrụ ha (nke bụ October 1, 2017), na Nzukọ a na-ejupụta na nsogbu.
Eziokwu bụ na ngwaọrụ ọhụụ niile nwere nsogbu dị iche iche. O nweghi ihe o mere ma ọ bụrụ Samsung, Apple ma ọ bụ Amazon. Eziokwu dị mfe na ngwaọrụ dị otú ahụ dị mgbagwoju anya ruru ọtụtụ puku mmadụ aka ma ọ dịkarịa ala mmadụ ole na ole na-arụ ọrụ nke ọma na ha ga-enweta ngalaba na-ezighị ezi.
N'ozuzu, Fitbit Ionic yiri ka ọ nwere otu okwu ahụ dakwasịrị Fitbit Blaze n'oge mmalite ya. Ihe kachasị mkpa na ndepụta ahụ bụ arụ ọrụ iji mekọrịta ekwentị na ekwentị mkpanaaka. Nke a bụ otu n'ime atụmatụ kachasị mma nke Fitbit maka Ionic, mana ọtụtụ ndị yiri ka ha nwere nsogbu ijikọ elekere na ekwentị ha.
N'aka nke ọzọ, ọrụ na-akọkwa dị iche iche okwu na music syncing, nke bụ ọrụ ọhụrụ. Usoro a yiri ka ọ dị ọtụtụ karịa mgbagwoju anya karịa ka o kwesịrị ịdị, mana ụlọ ọrụ ahụ gwara ndị ọrụ ha kwesịrị ịnwale ya.
Tinyere ihe ndị ọzọ, o yikwara ka ọ dị a na-ewere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwaọrụ gam akporo ochie enweghị dakọtara na Fitbit Ionic. A ezi echiche ga-abụ anya na ukara website mbụ na-elele gị mobile si ndakọrịta na Ionic tupu oge eruo, ma ụlọ ọrụ adịghị ma na-emelite ya website ịgbakwunye Ionic na tebụl ndakọrịta.
Enwere ike ịkwado nkwado Fitbit ugbu a na akụkọ banyere nsogbu sitere n'aka ndị ọrụ, ọtụtụ n'ime ha na-ekwu na ha na-enweta otu azịza ahụ oge ọ bụla, dịka ha kwesịrị imelite ngwa ngwa, kwụpụ ma gbakwunye elekere azụ na ama, yana ndị ọzọ yiri ihe.
N'ikpeazụ, ụbọchị mmalite nke Fitbit Ionic dabara na Sọnde, n'ihi ya enwere olileanya na ọrụ nkwado nke ụlọ ọrụ ahụ ga-eme ka ọrụ ya na ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ ya dị elu n'izu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » smartwatch » Akpa Fitbit Ionic Buyers Report Mmakọ na Mmakọ Issues
OUKITEL K5000 ohuru nwere batrị 5000 mAh yana 5,7 "ga - ere ahịa na ngwụcha ọnwa.